Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo Bosaaso uga qayb-galay kulan looga hadlayay Amniga – Radio Daljir
Juunyo 10, 2015 10:50 b 0
Arbaco, Juun 10, 2015 (Daljir) —Kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa amniga degmada Boosaaso ayaa waxaa ka Qayb-galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ,maamulka gobolka Bari,kan degmada Bosaaso iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolkaas.
Waxaa kulankan lagu soo hadal-qaaday arimo ay kamid yihiin la Dagaallanka kooxo lagu sheegay in ay argagax galinayaan amniga iyo sidii dadweynaha iyo laamaha Booliiska ay uga wada shaqayn lahaayeen adkaynta amniga guud ee gobolka Bari.
Duqa degmada Boosaaso, Maxamed Siciid Shabeelle ayaa ka dalbaday Shacabka Degmada inaysan ka hor-imaanin howl-gallo la sheegay in Ciidamada amniga ay ka billaabi doonaan gobolka Bari ,kuwaasi oo la sheegay in lagu beegsanayo kooxo liddi ku ah amniga.
“Dhammaanteen waa waajib nawada saaran inaan u is-taagno sidii aan u Horumarin lahayn amniga, waayo nolosheena asaaasiga ah ayaa ku xiran,\_” ayuu yiri duqa degmada Boosaaso oo warbaahinta siyaabo kala duwan ula hadlay kulanka kaddib.
Guddoomiyaha Gobolka Bari, Yuusuf Maxamed Wacays (Dhado) ayaa isagana sheegay in Hadda uu ku Mashquulsan yahay sidii uu wax uga Qaban lahaa Sare u kac ku yimid biyaha iyo korontada laga isticmaalo magaalada Bosaaso.
Xildhibaanada ka qayb-galay kulankan ayaa sheegay in ay ku jiraan kormeer shaqo oo ay ku marayaan deegaanada Puntland ,waxaana xildhibaan Cabdicasiis Saciid oo la hadlay wariyayaasha uu sheegay in ay qiimayn ku wadaan habka ay shaqeeyaan maamulada ka jira gobolada iyo kuwa degmooyinka .
Ugu dambayn, maamulka Puntland ayaa dagaal adag kula jira Al-shabaab oo Fariisamo ku leh Buuraleyda Galgala, Waxaana bilihii lasoo dhaafay Siyaabo kala duwan loo Weeraray Xarumo ay ku Sugnaayeen Ciidamada Amniga magaalada Boosaaso.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Arbaco 10